Pixel 3a na -enweta nnwale nguzogide na ịdịte aka a ma ama | Androidsis
Pixel 3a na-enweta JerryRig siri ike na nnwale siri ike
Maybọchị asaa gara aga bụ ụbọchị Google họọrọ iji gosipụta nke ọhụrụ Pixel 3a na 3a XL, ọnụahịa abụọ dị iche, karịa ihe ọ bụla, nha wee bịa gosi onwe ha dị ka ụzọ akụ na ụba na nke a kpụchara akpụ Pixel 3 na 3 XL, flagship duo malitere na October afọ gara aga site na ụlọ ọrụ Mountain View.
Mgbe emechara ya, Pixel 3a abụrụla onye isi okwu nke ọtụtụ akụkọ na izu ndị na-adịbeghị anya, na oge a ọ bụghị ihe dị iche, ebe ọ bụ na njedebe ahụ agafeela ihe ịma aka ma ama JerryRigEnwale niile, nke nwalere ike ya na ogologo oge ya.
Google Pixel 3a lanarịrị JerryRigEnwale niile
Pixel 3a, n’adịghị ka ụdị nke mbụ ya, nke bụ Pixel 3, bụ nke a na-ejikarị plastik eme, ihe na-adịkarịkarị na obere igwe na etiti, mana nke ahụ apụtaghị na ha adịghị mma. N'aka nke ọzọ, ngwaọrụ a egosila ya, na-apụta mmeri na ule, ọ bụ ezie na ọ bụghị ebibighị ya, ee.
Dị ka a pụrụ ịhụ na vidiyo dị n'elu, mgbe a na-etinye nyocha ọkọ ahụ na pikselụ Pixel 3a, nke teknụzụ Dragontrail na-echekwa, nke yiri Coror's Gorilla, ọ na-amalite ịta ahụhụ nke ukwuu. Site na ọkwa 7. Otú ọ dị, ọ bụ kwesiri ka ekwuru, n'uzo di nma, na o bu ihe ijuanya na o ruru ebe a.
N'aka nke ọzọ, onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ na-adị mfe mbibi mgbe emechara ya, ọ bụ ezie na mgbe ahụ ọ gara n'ihu na-arụ ọrụ nke ọma na enweghị nsogbu ọ bụla. Ekwesiri ikwuputa na akuku Google wepuru ule ugwo n'uzo di egwu na ule oku, n'agbanyeghi na ogugu ahu huru, dika echere ya, ma obughi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Pixel 3a na-enweta JerryRig siri ike na nnwale siri ike
Nkọwa n'etiti Oukitel Y4800 na Redmi Rịba ama 7